Moe Kai: မြန်မာ့ အားကစား ကမ္ဘာလွှမ်းဖို.
ဒီက အားကစားသမားတွေလိုတော့ အာဟာရ (nurtional program)၊ Physiotherapist ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ psychology counselling တွေ ........ မြောက်များစွာသော အားကစားသမားတွေအတွက် ကုထုံးတွေတော့ မြန်မာမှာ ရှိသေးမယ်မထင်ပါ။
အဲဒီတော့လဲ မရှိရှိတာလေးတွေနဲ. ကြံဖန်ပြီး အခုထိ ခရီးရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့ တို. ဗမာတွေ အတွက် ဒီလိုပဲ ကြံဖန်ပြီးပဲ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။